Kooxda Barcelona oo maaskarooyinka wajiga ugu deeqday waaxda caafimaadka Catalonia – Gool FM
(Barcelona) 28 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay 30,000 maaskarooyinka wajiga ah gaarsiin doonaan waaxda caafimaadka ee gobolka Catalonia si loola dagaallamo caabuqa coronavirus inuu ku sii fido gobolkaas.
Alaabtan waxaa kooxda Barca ay ka heshay bishii la soo dhaafay ee February shirkadda Shiineeska ah Taiping Life Insurance oo ka mid ah maalgeliyaasha naadiga La Liga ka ciyaarta.
Waxaa ku jira maaskarooyinkaas kuwa loogu talo galay inay isticmaali karaan shaqsiyaadka aanan caafimaadka ka shaqeynin, iyadoo lagu sameeyay Shiinaha, horraanna la soo gaarsiiyay magaalada Barcelona.
Naadiga Blaugrana ayaa ka mid ah kooxaha ka dhisan Spain ee isku dayaya inay ka qayb qaataan ololaha lagula dagaallamayo in lagu xakameeyo faafidda coronavirus.
Si la mid ah ciyaartoyda kooxda Barcelona ayaa farriimo kala duwan baraha bulshada kula wadaagay dadweynaha inay gurigooda joogaan si ay u yaraato halista faafitaanka feyruska COVID-19.